Hiran State - News: HS:- Kooxda Shabaab oo dad badan xabsiga u taxaabay degmada Maxaas kadib markii ay diideen
HS:- Kooxda Shabaab oo dad badan xabsiga u taxaabay degmada Maxaas kadib markii ay diideen
HS:-Shacabka degmada Maxaas ayaa markii ugu horeysay diiday iney bixiyaan lacago baad ah oo ay kooxda shabaab horey uga qaadi jirtay dadka kunool degmadaasi.
Degmada Maxaas waxey ka mid tahay degaanada ay gacanta ku hayaan kooxda Shabaab kuwooda ka soo jeeda gobolada Bay iyo Bakool halkaasi oo in mudo ahba ay kubaadayeen shacabka degmadaasi ku nool. hadaba murankani ayaa yimid kadib markii dad beeraley iyo xoolo dhaqato iskugu jira lagu kordhiyey lacagahii baada ahaa ee loogu yeeri jiray Sakada, kadibna lagu xiro halkaasi dad maato ah oo u badan dan yar hada ka soo kabmay abaarahii faraha badnaa ee ka dhacay guud ahaan dalka Somaliya gaar ahaan Hiiraan.
Maleeshiyada kooxda Shabaab ayaa la sheegayaa iney arintaani ku qasabtay kadib dhaqaalo xumo soo food saartay. degmada Maxaas waxey ka mid tahay degmooyinka ay Shabaab gacanta kuhaya ee ku yaal Hiiraan, waxeyna degmadaasi u tahay goobta ay ku farsameeyaan waxyaalaha qarxa si ay uga fuliyaan qaraxyo magaalooyinka kale ee Hiiraan.
Sidoo kale waxey u tahay saldhig ay ka maamulan degmada Ceelbuur si uusan uga xirmin jidka dheer ee isku xira Bulo Burde iyo degmada Ceelbuur.
Wararkii ugu danbeyay ee naga soo gaara degmada Maxaas waxey sheegayaan in Shabaabka ka taliya degmada aysan ka badneyn 50 dhalinayo oo u badan dhaqlinyaro ka soo jeeda gobolada Bay iyo Bakool magaaladana ay ku nool yahiin dhawr kun oo qof oo iskugu jirta qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Maxaas.
Al-Shabaab ayaa xabsiga u taxaabtay dad aad u badan oo Beeraleey iyo xoolo dhaqato iskugu jira xilli ay dadkaasi ku amreen in ay bixiyaan waxa ay ugu yeereen Sakawaad (canshuur) kadibna ay dadkaasi iska dhaga tireen amarada kooxda ka soo baxay in ay fuliyaan taasi oo keentay in xabsiga degmada Maxaas loo taxaabo dhamaan dadkii arrintaasi ka hor yimid amba diiday iney bixiyaan lacagta baada ah.
Dadka deegaanka oo xiriir la sameyay qaar ka mid ah warbaahinta ka howl gala gudaha wadanka ayaa shegay in ay dhibaato xoogan ay ku qabaan kooxda Al-Shabaab oo si baad ah dadka uga qaadeysa lacago aysan awood u lahayd dadka in ay bixiyaan siiba marka la weydiiyo iney keenaan xoolahooda sida Geela, Ari iyo waxiiba ay heli karaan dadku.
Maxaas waxey ka mid tahay magaalooyinka Shabaab taariikhda ku reebay kadib markii ay ku waayeen hogaamiyaal sar sare inkasta oo ay hada sidii ay doonaan dadka ka yeelaan maadama uusan wax dagaal ah oo cabsi galin kara kaka furneyn agagaarka degmada sida dhici jirtay xiliyadii hore kadib markii inta badan ciidamadii ka dagaalami jirtay halkaasi ay aadeen degmada Guriceel oo ka tirsan Galgaduud oo ay ka difaacan kooxda shabaab iyagoo sheeganaya Ahalusuna waljameea walow dadka qaarkood sheegayaan inuu halkaasi dhalinyarada geeyey Aden Abdulle Cawaale oo ah shaqsi ay reer abti u yahiin reer Galgaduud arintanina ay aheyd mid siyaaasad ahaan laga soo shaqeeyey, shacabkii Maxaasna sidaasi ay u dhibaateeyaan kooxda mayalka adag ee Shabaab.
· admin on November 18 2011 10:29:11 · 0 Comments · 2929 Reads ·
14,589,151 unique visits